Gbasara anyị CMOAPI
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-ejikọta R&D na n'ichepụta.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. guzobere na 2007, bụ ụlọ ọrụ ntanetị nke teknụzụ na-etinye aka na nyocha, mmepe na ịzụ ahịa nke akụrụngwa akụrụngwa.The ngwaahịa mianly: Lorcaserin, intermediates nke Lorcaserin, orlistat ， Sesamol, tadalafil na etiti nke tadalafil, wdg.
Asọmpi ụlọ ọrụ
Factorylọ ọrụ anyị nwere ngwa nchọpụta zuru oke, 60 nke HPLC, 20 chromatograph nke gas, LCMS, ELSD, ultraviolet na ihe nlere anya, na-eme ka ndị na-eme nkụ na ngwa ndị ọzọ dị elu. Ọ gafere ISO14001, ISO9001 na DMF asambodo site na njikọta na inweta, yana usoro njikwa njikwa zuru oke.
Lezienụ anya na nchedo nke akụrụngwa
Companylọ ọrụ anyị na-eji ọtụtụ ndị ọkachamara nọ n'ọrụ nyocha mba dị iche iche, ma nwee ike zuru oke nke ọmụmụ ụlọ nyocha, nnwale nke ụgbọ elu na mmepụta.
Enwere ndị dọkịta 11 na karịa nna ukwu 46, ndị ọkà mmụta sayensị, na injinia na ụlọ ọrụ anyị.The isi ngwaahịa mmepụta API na-ekpuchi mpaghara karịrị 40 mu.The GMP na-emepụta ọgwụ na-ekpuchi mpaghara karịrị 160mu ma nwee ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ, ụlọ nyocha nhazi na ụlọ nchọta. , ulo obibi, ebe obibi, na ihe ndị ọzọ.